Mamorona horonan-tsary mihetsika tsara miaraka amin'ny Google Earth Studio | Famoronana an-tserasera
Google dia nanangana vao haingana ny Canvas, fampiharana sary vaovao ho an'ny fanoratana. Mbola lavitra lavitra izao ny manome anao fihodinana iray ao amin'ny Google Earth miaraka amin'ny Google Earth Studio. Fitaovana vaovao ahafahanao mamorona horonan-tsary mahafinaritra na karazana atiny geospatial mihetsika.
Google mametraka ny fototry ny fampahalalana rehetra misy ao amin'ny Google Earth izy io ka amin'ny Chrome dia azonao atao ny mamorona sary mihetsika mahafinaritra ao anatin'ny minitra vitsy. Fitaovana iray azontsika idirana, na dia misy fanasana avy any Google aza.
Miaraka amin'ny Earth Studio isika voalohany indrindra fitaovana fanentanana mahazatra izay tsy maintsy hampiasa keyframes hamoronana ireo tifitra manokana ho an'ny vahaolana isan-karazany. Raha haintsika ny mampiasa azy tsara dia azon'ny mpijery heverina fa tena misy ilay horonantsary, satria mahavariana fotsiny ny haitao ampiasaina amin'ny 3D.
Afaka mamorona orbit na maka teboka roa hanatanterahana sidina an'habakabaka. Google dia nanao zavatra mora be ho antsika tamin'ny fanomezana modely dimy ahafahantsika manomboka ny diantsika miaraka amin'ny Google Earth Studio.
Manana andiana fitaovana fanovana hafa koa izahay toa ny marika na ny presse, ary koa fanondranana ireo sary fakantsary avy amin'ny Earth Studio mankany amin'ny Adobe After Effects. Miaraka amin'izay saika tsy misy fetra ny fahafaha-manao rehefa manana ny Google Earth miaraka amina sary marobe izay ahafahantsika mizaha tanàna, faritra ary ireo toerana izay eken'ny maro tokoa.
Para afaka miditra amin'ny Earth Studio mila misoratra anarana ianao avy amin'ity rohy ity ary miandry ny Google hanasa anao. Ho hita amin'ny Internet ilay fitaovana, mba hahafahanao miasa miaraka aminy na aiza na aiza.
Fitaovana lehibe iray hafa avy amin'i Google, tahaka ny mahazatra fa mahery Canvas, que tsy ho ela dia hanana izahay rehetra ho an'ny sary mihetsika mahafinaritra fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Google Earth Studio dia fitaovana fanentanana vaovao ho an'ny sary zanabolana sy 3D